गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? किन हुन्छ गर्भावस्थामा पायल्स ? यस्ता छन् लक्षण र उपचार बिधि - ज्ञानविज्ञान
गर्भावस्थामा उच्च रत्तचाप, मधुमेह भए के गर्ने ? गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? धेरैजसो गर्भवतीले झेल्ने प्रश्न हो यो । गर्भावस्था आफैमा एक जटिल शारीरिक अवस्था हो । यतिबेला गर्भवतीको शरीर यसैपनि संवेदनशिल हुन्छन् । उनीहरुको गर्भमा अर्को शरीर हुर्किरहेको हुन्छ । यसले गर्भवतीको शरीरमा अनेकन समस्या ल्याइरहेको हुन्छ ।
यद्यपी गर्भावस्थामा पनि शारीरिक सक्रियता जरुरी हुन्छ । यदि पेटमा बच्चाको स्थिती सही छ भने कब्जियतको समस्या हुँदैन ।
पानी प्रशस्त पिउने, हरियो सागपात काँचै खाने, फलफुल खाने, चोकरसहितको गहुँको पिठो, रोटी, जौ, ब्राउन राइस, रहर तथा मुगको दाल खाने ।खानासंग मुला, काँक्रो, गाँजर खाने, नरिबल, अनार, स्याउ, बेलजस्ता फलफुल, करेला, धनिया, लौका खानु राम्रो हुन्छ ।
कब्जियत हुन नदिने, हरेक दिन शारीरिक व्यायाम गर्ने, आफ्नो पिसाबले गद्द्वार धुने, एक गिलास गाइको दुधमा आधा कागती निचोरेर तुरुन्त खाँदा कसै कसैलाई रगत तथा पिप आउने जस्ता समस्या ठीक भएका छन् । नरिवलको बाहिरको जटा डढाएर एक चिम्टी खरानी र दुबोको २ चम्चा रस घोलेर बिहान बेलुका एक गिलास मनतातो पानीसंग खाँदा सन्चो भएको पाइएको छ ।
कसैलाई मुलाको बिउ कुटेर तोरीको तेलमा फिटेर दिसा गरिसकेपछि लगाउँदा निको हुन्छ । कसैलाई फिटकिरी एक टुक्रा राखेर दश लिटर जति पानीमा दिनको दश मिनेट बस्दा धेरै आराम मिल्छ । नियमित रुपमा योग गर्दा पनि सन्चो हुन्छ । यो समस्याको नआत्तिइकन उपचार गर्नुपर्छ ।
औषधि उपचारबाट निको हुन केही समय लाग्न सक्छ । शल्यक्रिया पनि अन्तिम उपचार भने होइन । कहिलकोही शल्यक्रियापछि पनि समस्या बल्झिएको र निको नभएको पाइन्छ ।
पायल्स रोग यो एक मलद्वार सबन्धी रोग हो । अरु जस्तै यो रोगका विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । मानिसहरुको भिन्न जिवन शैली र खानपनले गर्दा आजकाल धेरैलाई विभिन्न प्रकारको रोग लाग्ने गरेको छ । यस मध्ये पायल्स रोग धेरै मान्छेको समस्याको रुपमा रहेको छ । लाजका कारण धेरै मान्छेले खुलेर परिवर संग कुरा गर्दैनन् । अझ कतिलाई त पाईल्स रोग के हो भन्ने सहित थाहा हुदैन ।
पहिलो र दोश्रो चरणमा निर्धक्क भएर रोगीले यो रोग बारे खुलस्त चिकित्सक संग सल्लाह तथ सुझाव लिई उपचार गरेमा यो रोग पुर्ण रुपले ठिक हुन्छ । तर धेरै मानिसहरु लाज-सरम मानेर आफुले रोग छुपाउनाले जटिल समस्या समेत भई पछि क्यान्सर भएको छ । नेपाली जन-समाजमा परिवार, साथि-भाई ईत्यादि नजिकका मान्छेलाई पनि रोग बारे लुकाएर बस्ने बानी हुन्छ ।
४) चौथो चरण स् मासु बाहिर आएपछि घचाटेर पनि भित्र लान गाह्रो पर्छ । रगत आउँछ । दिशा गर्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ । गर्भवती महिलामा पायल्सको संभावना बढी हुन्छ । पायल्सबाट बच्ने उपाय स्वस्थ खाना खाने । हरियो सागपात, सिजन अनुसारका फलफुल खाने । माथिका कुनै पनि लक्षण देखिए तुरुन्त विशेषज्ञकोमा उपचार गराउने । पायल्सलाई सामान्य रुपमा हुँदैन । यसको बेलैमा उपचार नगरे छाला,पेट लगायत अन्य अंगमा विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । पछि गएर क्यान्सरको सम्भावना प्रबल रहन्छ।
Don't Miss it कसरी अक्षरलेखन सुधार्ने आफ्नाे बच्चाकाे ? यस्ता छन् उपाय
Up Next तपाई कुन बार जन्मिनु भयो ? यी बार जन्मिएका मान्छेसँग यस्ता गुण हुन्छ – थाहापाउनुहोस